Atirishooyinkii Sanadkii 2000 Soo Caan Baxeen Balse La Iska Ilaaway Maanta (+Sawiro) – Filimside.net
Atirishooyinkii Sanadkii 2000 Soo Caan Baxeen Balse La Iska Ilaaway Maanta (+Sawiro)
Waxaa jiraan atirishooyin badan oo qarnigaan cusub Bollywoodka imaadeen balse aanan wax magac iyo maqaam shaqeesanin kuwaaso saaxada ka dhaceen.
Si deg deg ah ayee atirishooyinkan calankooda udhacay waxayna markii dambe waayen wax film u dhiibta maadama daawadayaasha iska diiden qaab jiliinkoda.
Halkaan hoose kaga bogo atirishooyinka 2000 soo baxeen maantana la ilaaway:
Waxay sameesay aflaam caan ah sida Munna Bhai iyo Lagaan ayadoo Tusshar Kapoor-na la sameesay filmkii Sharat balse Gracy Bollywoodka hadafkeedi kama aysan gaarin maantana waa la iska hilmaamay.
Atirishada Rimi Sen waxaa la islahaa Bollywoodka heer sare ayee ka gaare kadib markii ay kasoo muuqatay aflaamta guusha waca gaareen sida Hungama, Dhoom iyo Garam Masala balse si deg deg ah ayuu calankeeda ku dhacay waana la iska hilmaamay.
Esha waxay kasoo jeeda qoysk fanka maqaamkii ugu sareyeen kasoo gaareen aabahed waa Dharmendra Super Star weyn ah halka walaalked Sunny Deol 90-kii Bollywoodka hogaanka u hayey sido kalena Bobby Deol xidig caan ah ayuu noqday.
Balse Esha midaaas uma suurto galin inkastoo ay dadaashay hadana maqaamkii ay rabtay kama aysan gaarin fanka maadama qaab jiliinkii laga rabay mashaariicdii laga rabay ay sameen weyday.
Quruxleydan aflaam badan oo guulo gaareen ayee sameesay sido kalena waqtigeedii caan ayee ahed balse nasiibka kuma uusan saacidin inee Ayesha noqoto xidig Box-office ee waxay noqotay xidig saxaafadeed.
Atirishadan waxay kusoo caan baxday filmkii Andaaz ee ay la jishay Akshay kumar iyo Priyanka Chopra xaqiiq ahaan mashruucan waxaa lagu amaanay Priyanka doorkeda oo ahaaa mid heer sare ah inkastoo atirisho caawiso kaliy ahed.
Lara waxay ahed mid filmada hogaamisa balse markii dambe ilaa hader aflaamta doorar yar yar ayee kaga soo muuqaata sababto ah nasiibkeda kuma saacidin oo filmsameye filmkiisa atirisho kaga dhigaayo majirto Lara Dutta maadama daawadayaasha iska diideen.
Waxaa Aqrisay 71